Kutheni iiMovie zeShark zizinto ezinokuthenjwa kwiBhokisi yeeOfisi zebhokisi: Ukuntywila okunzulu - Iimuvi
Eyona Iimuvi Kutheni iiMovie zeShark zizinto ezinokuthenjwa kwiBhokisi yeeOfisi zebhokisi: Ukuntywila okunzulu
Kutheni le nto abaphulaphuli bengenakufumana ngokwaneleyo imovie yookrebe?UKaitlyn Flannagan
c baqhuba umhlaba
Awusayi kuphinda ungene emanzini kwakhona.
Musa ukushiya ngasemva.
Ayisiyongxaki ukuba yeyiphi na i-tagline yakho. Ukuba wenza imovie yookrebe, ngaba une-hit ezandleni zakho.
I-ofisi yebhokisi yaseMntla Melika ihle malunga neepesenti ezilithoba xa kuthelekiswa nonyaka ophelileyo. Ukuthengiswa kwetikiti lomdlalo weqonga kuye kwancipha ukusukela ngo-2002. Ukhetho lokonwabisa ekhaya baqhubeke ngokuntywila ngamazinyo abo ekuziqondeni ngokudibeneyo kwenkcubeko ye pop. Ukanti phakathi kokubulawa kwabantu kunye neengxwabangxwaba zokwenza iimuviemaking zanamhlanje, iifilimu zikakrebe zihlala ziyinto enomtsalane ebhokisini yeofisi.
BONA KWAKHO: Into ekufuneka uyazi malunga 'nemihlathi' ilandelelana ngaphambi kokuba uzidle zonke kwiNetflix
U-Godzilla angangukumkani wezilo, kodwa umhlophe omhlophe gnarly ngokucacileyo ngukumkani weewallet zethu.
Uhlobo oludlule, Inkqubo yeMeg iqale yadlula kulo lonke ulindelo olusengqiqweni lokuhlafuna i-530 yezigidi zeedola kwihlabathi liphela. Ihlobo langaphambi koko, 47 yeemitha Ezantsi ifumene ngaphezulu kwe- $ 40 yezigidi ngokuchasene ne- $ 5.5 yezigidi kuhlahlo-lwabiwo mali. Kwaye ehlotyeni lika-2016 (Qaphela ukuba ixesha lolwandle eliphambili yeyona nto ibaluleke kakhulu kwi-movie ye-shark real estate), Iingqungquthela iginye inyakatho ye-115 yezigidi zeedola ngokuchasene nohlahlo-lwabiwo mali oluzizigidi ezili-17. Siphila kwihlabathi apho Sharknado yinto — ingaba obo abonelanga?
Imihlathi Baqulunqa i-blockbuster yehlobo emva kowe-1975, baba yeyona bhanya-bhanya iphambili kwimbali okwexeshana. Elo titanic cinstatic monstrosity yaphosa phantsi indawo yokumemeza kuhlobo olungaphantsi. Kodwa kutheni iifilimu zikakrebe zihlangana nabaphulaphuli ngamandla kwaye kutheni besenza amashishini amakhulu kwindawo yentengiso yaseHollywood engazinzanga? Ukuphendula lo mbuzo, sithethe neengcali zeofisi, ababhali kunye noonjingalwazi umsebenzi wabo ujikeleza kuzo zonke iintlanzi ezinkulu. Nantsi into esiyifundileyo.
Uqoqosho lweMovie yoShark
Imihlathi yayingeyomboniso bhanyabhanya wokuqala wokrebe owafaka uloyiko ezintliziyweni nasezingqondweni zabaphulaphuli. Iifilimu zakwakrebe eziphawulezileyo zibandakanya Ukufa okuMhlophe (Ngo-1936), Abalwi beShark (1956) kunye Ukrebe! (1969). Umntu unokuphikisa oko Indalo evela kwiLagoon eMnyama (Ngo-1954) yaqala yazisa umbono we-cinematic wezidalwa ezibulalayo ezihleli phantsi kwamanzi. Kodwa Imihlathi uthathe umxholo kwaye wayiguqula yonke indlela yaya kutsho kwi-11, echaza kwakhona studio yokwenza ifilimu kunye nemodeli yonke yaseHollywood.
USpielberg wazisa loo mbono kubaphulaphuli abaninzi ngokusebenzisa ifilimu, uPaul Dergarabedian, umhlalutyi osasazo omkhulu weComscore, uxelele uMbonisi. Ngethuba lokuqala, abaphulaphuli abaqhelekileyo ababengathembeli kwingcinga yabo. Inkangeleko ebonakalayo yazisa ubomi ngemfazwe yookrebe kwaye yenza isenzo, i-adventure, uloyiko, umtsalane ovuyisayo.
Ukususela ngoko Imihlathi , Uya kuba nzima ukufumana ifilimu yoshark yeqonga enesidalwa esijongwa njengesidalwa kunye nesakhiwo esithile sokuqala esingazange sisebenze eofisini yebhokisi.
Iimovie zookrebe azinakuphikiswa, azinakutshatyalaliswa kwaye ziphinde zivavanye ubungqina. Oko akutsho ukuba awunakho ukuba nebhombu, kodwa yenye yezona ntlobo zomeleleyo kuzo zonke iifilimu, utshilo uDergarabedian.
Ngo-2013 Sharknado , 2011’s Sharknight 3D , 2004 ’s Vula Amanzi, ngo-1999 Ulwandle oluBlue Blue Zonke iifilimu zazinenzuzo, njengoko zazinjalo ezi zinto zintathu zikhankanywe ngaphambilana. Ke ukuba iimovie zikakrebe ziingxowa-mali ezingaguquguqukiyo, kutheni ii-studio zingazibethi kwikota nganye?
Ifilimu yookrebe esebenzayo, ndingathi, akukho lula ukuyenza, ngaphandle kwento yokuba olu hlobo lubonakala lula ngokukhohlisa, u-Barna Donovan, unjingalwazi wonxibelelwano kunye nezifundo zosasazo kwiYunivesithi yase-Saint Peter, uxelele i-Braganca nge-imeyile. Unokhetho olunqunyelweyo kuseto kunye neeseti ezinqongopheleyo zamacebo kunye nabalinganiswa bokusebenza kunye nabo (abakhenkethi, oososayensi, oomatiloshe, abalobi, amajoni, abatyibilikisi okanye ukuthotyelwa komthetho) abaxineneyo kwisikhephe esikhubazekileyo, inqanawa etshonayo, isiqwenga setye esincinci, inkwili okanye inkwankca ngaphantsi kwamanzi, ukuzisa izimvo ezintsha kunye neendlela zokwenza umboniso kashark ngumceli mngeni.
Nganye ye Imihlathi Ukulandelelana kwakuyizidudiso ezibalulekileyo, ezikhokelele kwintengiso. Kodwa abaphathi beefilimu abazizidenge (kulungile, hayi njalo ), Bayayazi indlela yokufunda inkcubeko kunye nokuqikelela imikhwa, nokuba banomdla wokuqhuba umxholo ophumeleleyo emhlabeni. Balumkile ukuba bangayikhukumi imarike ngeemovie ezininzi ezisekwe kookrebe ngaxeshanye (njengoko benzayo kwi-vampire binge yaseHollywood phakathi kwiminyaka yoo-2000) ukwenzela ukuthintela uhlobo olo lube yinto ethandwayo. Kodwa oko akuthethi ukuba akukho ndawo yamabali amaninzi kulo mthambo.
Nangona kungakhange kubekho Imihlathi Ifilimu kwiminyaka engama-32, nanini na xa kukho imovie entsha yookrebe kwimidlalo yeqonga ngokungafaniyo nokuthelekiswa neklasikhi yeUniversal, uJeff Bock, umhlalutyi webhokisi ephezulu kwi-Exhibitor Relations, uxelele uMbonisi. Ke kutheni le nto iUniversal ingenzi enye? Umbuzo olungileyo. Ndiqinisekile ukuba iBlumhouse inokubeka kwakhona ukuqala kwakhona phantsi kwe- $ 25 yezigidi. Oku kubonakala ngathi akukho-brainer. Ixesha lokubeka loo chum emanzini.
U-Bock wenza inqaku elungileyo-olu hlobo lungezantsi alunyanzelisi ngokuthe ngqo ii-studio ukuba zivule iibhanki zazo zehagu. Ukujonga imiboniso bhanyabhanya yookrebe ekhutshiweyo yee-2000s, Inkqubo yeMeg Yeyona nto iphilayo esebenzayo kwifilimu enohlahlo-lwabiwo mali olungaphezulu kwe- $ 30 yezigidi. Okona kuninzi, ezi zinto zibiza ixabiso eliphantsi ezibonelela ngebuck yakho emnandi. Uqoqosho lusengqiqweni, njengoko kunjalo nangoko kutsalwa kwezi bhanyabhanya kuthi.
I-Psychology yeeMidlalo zeShark
Ukuqonda ukuba yintoni malunga neemovie zikakrebe esizifumana zinomtsalane, kufuneka siqale siqonde iziseko ezenzelwe ukuba imiboniso bhanyabhanya eyonwabisayo kunye noloyiko.
Utshintsho kwinkcubeko luhlala lubonakaliswa kwiimovie ezoyikisayo, umbhali kunye nombhali wezolonwabo uChristopher McKittrick uxelele uMbonisi. Watsho ukuba ungayibona yonke indawo ukusukela kwiminyaka yee-1950s ezoyikisayo zemiboniso bhanyabhanya esekwe kwisayensi-eyoyikekayo yeAtomic Age, ukuya kumabonakude aphantsi ohlahlo-lwabiwo mali malunga neenkcubeko ezivele emva kokuba usapho lakwaManson lwenze imixholo ephambili ngo-1969, ukuya kwiifilim ezibonisa uloyiko lwababulali ababulalayo kwii-1980s, kubuhlanga bobuhlanga obujongwa kwi-Oscar Phuma .
Kukho izimvo ezahlukeneyo malunga nokuba zeziphi izinto ezikoyikisayo zenkcubeko ezimelwe ziimovie zikakrebe. Abanye bakholelwa ukuba zii-microcosm zoloyiko oluhlangeneyo esiziva ngalo ngentlekele zehlabathi esizibonayo zimelwe ziindaba, ezopolitiko nakumajelo asekuhlaleni. Abanye bakholelwa Imihlathi iyimveliso yemozulu yezentlalo kunye nezenzululwazi kunye nabenzi bomgaqo-nkqubo wee-1960 kunye nee-70s ezichaza isiphumo somntu esingakhange siqwalaselwe kwindalo yehlabathi. Ukrebe omkhulu omhlophe obaleka phantsi kwamaza, ongabonakaliyo kude kube ngumzuzu wokugqibela ngaphambi kokuba uhlasele, uba sisikweko esigqibeleleyo sokungakwazi kwabantu ngokupheleleyo ukulawula indalo, utshilo uDonovan.
Abanye bakholelwa ukuba kulula kakhulu. Ookrebe zizilo zokwenene; Zizidalwa ezikhoyo kwaye zihlala kwindawo enye emhlabeni apho ubuntu bungaphumli kamnandi phezu kwetyathanga lokutya. Uhlobo lwe-monster-in-house lithetha uloyiko olukhulu oluqondwa ngumntu wonke: musa ukutyiwa.
Iifilimu ezothusayo zookrebe zisebenza kwinqanaba elisisiseko: ookrebe zizilwanyana ezijongeka zisoyikeka, kwaye abantu baphumile kwinto yabo xa bejongana nabo, utshilo uMcKittrick. Uninzi lwabantu luyakwazi ukoyika ukrebe. Ngenxa yoko, iimovie zikakrebe zilula ukuzithengisa kuba ingqikelelo inokukhutshelwa kwisiseko 'somntu ngokuchasene nookrebe abakhulu'. Olo loyiko lusebenza kulo naluphi na ulwimi.
Kwizinto zokuzonwabisa, iiarchetypes ngokubanzi ziwela kwelinye lala macandelo mabini: ezingezizo ezomntu kunye nezomntu. Ezi zilandelayo zimelwe ngamaqhawe amakhulu, abaphambukeli abathile, i-vampires-nantoni na ene-bipedal locomotion kunye ne-exoskeleton yabantu. Zifana nathi kwaye, ngenxa yoko, azoyiki kangako. I-non-humanoid, njengoko ndiqinisekile ukuba unokuthekelela, iya kuba zizidalwa ezinje ngookrebe, iidragons kunye neepesenti ezingama-70 zokucinga kukaDavid Cronenberg. Ezi ngozi zingenabuntu zihlala zenzelwe ukubonisa umbono endaweni yesoyikiso esiqhelekileyo. Luloyiko lwento engaziwayo, umngcipheko wokwanda uye kwiindawo ezingezizo ezabantu, ukubakho kwentlekele elinde kanye kwikona (okanye phantsi komhlaba).
Ukulandelelana 47 yeemitha Ezantsi: Uncaged imiselwe ukubetha imiboniso bhanyabhanya ngo-Agasti, ukuqhubekeka nokuqinisa ukubuya kwe-shark-movie esizifumanayo ngoku. Nangona ifomula yohlobo inokuba ngumqobo kwaye kunzima ukwahluka, ezo zinokunyathela amanzi kufutshane ne-cliché zize ziphose (i-dinosaur shark! ) ndikwazile ukwandisa ixesha lokuphila kwaye bavuna izibonelelo. Le ndlela ingabizi kakhulu ibonakalise ukuba yinto yokubheja yorhwebo kwii studio. Nokuba ezi bhanyabhanya ekugqibeleni ziyinyani kwi-hubris yomntu, intlekele yokusingqongileyo okanye ukoyikeka nje okuqinisekileyo, inyani kukuba iyasebenza.
Ngelishwa, Imihlathi 2 kusenokwenzeka ukuba uqikelele amandla omdlalo bhanyabhanya okomeleleyo xa ehlekisa,Kanye xa ucinga ukuba kukhuselekile ukubuyela emanzini…
Zonke Iindlela Zokuthanda ‘Zonke Iindlela Zokuthi Ndiyakuthanda’
Khwela iliza lokuziqhuba kuMercedes '2017 AMG C43 Coupe
I-Banksy ayisiyonto ingaqhelekanga ekusebenziseni iflegi yaseMelika njengophawu ngaphakathi komsebenzi wakhe
Ngaba i-oprah ithenge ababukeli besisindo
ioyile ye-cbd yeekati ezixhalabileyo
UGeorge uza kuthenga i-oililly
Eyona ilaptop ilungele iofisi yasekhaya
umva yefowuni # jonga phezulu
Usihlalo weofisi yeentlungu ezisezantsi
U-hillary uza kuphumelela unyulo